Zhengzhou Gofine Machine Izixhobo Co., Ltd.ngumvelisi ogxile kwimveliso kunye nokuthengiswa komatshini ohlanganisiweyo wesichumiso kunye nomatshini wezichumiso zezinto eziphilayo, ulawula ngokungqongqo umgangatho ngokwemigangatho. Inkampani yethu inenkxaso yezobuchwephesha eyomeleleyo, abasebenzi abakumgangatho ophezulu wokuvelisa, iziko loyilo lweCAD, kunye neqela lenkonzo yasemva kokuthengisa. Umatshini we-Gofine kudala uzibophelele kuphando, kwimveliso kunye nasekuphuhlisweni kwegranules enkulu, ephakathi kunye encinci. Inkampani yethu ibonelela ngeenkonzo zabathengi ezintsha nezindala ezinje ngenkqubo yoyilo, uyilo lwezixhobo, ufakelo, ukugunyazisa kunye neefomula zezichumiso, njl. Sikwabonelela ngeenkonzo zoqeqesho lwabasebenzi kwiziko labathengi.
Sisebenza ikakhulu kwizichumiso zezinto eziphilayo kunye nezixhobo zemveliso yezichumiso ezingaphiliyo nesiphumo sonyaka seetoni ezingama-10,000 ukuya kuma-200,000. Iseti epheleleyo yeemveliso zemigca yemveliso zibandakanya: izixhobo zecompany yezichumisi, izixhobo zezichumiso eziphilayo, imfuyo kunye nenkuku yenkukhu isichumisi somgquba, njl., Iimveliso ezizodwa zibandakanya: izixhobo zokuchumisa isichumiso, Umxhubi, idiski Izixhobo ezincedisayo ezinje ngegranulator, grinder, dehydrator, njl. kunye nenkampani yethu ngokudibeneyo yokuvuselela uphuhliso lolimo lwezichumiso.
I-Zhengzhou Gofine Machinery Equipment Co., Ltd. inabasebenzi abangaphezulu kwe-100, iinjineli ezininzi ezijolise kuyilo lwemveliso, ezinesakhono esomeleleyo sophuhliso lwemveliso, zinokutshatisa kwaye zincomelele iintlobo ezahlukeneyo zezixhobo zezolimo kubathengi. I-Zhengzhou Gofine Machinery Equipment Co., Ltd. nayo ixhomekeke kwizibonelelo zayo, ukudibanisa izixhobo zangaphandle, ukwandisa ulawulo lwangaphakathi, kunye nokuphonononga rhoqo kunye nokudala iNtsha, kwicala lobungcali kwezamashishini kunye nokwahluka kweshishini.
2009, inkampani umatshini isichumiso GUFENG esekwe.
Ngo-2012, Guqula igama lesiNgesi "GOFINE".
Ngo-2015, kwimarike yaphesheya ngaphezulu kwesigidi se-10.
Ngo-2018, bhalisa ilogo "GOFINE".